China Juda kiln -300T/D umgca wokuvelisa -EPC umzi-mveliso weprojekthi kunye nabavelisi | Yuda
Inkqubo yeBatcher: Ilitye kunye namalahle ahanjiswa ngokulandelelanayo ukuya kwi-emele yelitye kunye namalahle e-cache ngamabhanti;
Inkqubo yokutya: ilitye kunye namalahle agcinwe kwibhanti edibeneyo ihanjiswa kwi-hopper, esetyenziswa yi-winder ukwenza i-hopper ijikeleze phezulu kwaye ihle ukuze idliwe, ephucula umthamo wezothutho kwaye iphumelele ukusebenza kakuhle kunye nokugcinwa kwamandla.
Inkqubo yokuhambisa: Umxube welitye kunye namalahle uthanjiswa kwi-buffer hopper nge-feeder nakwi-rotary feeder. Umxube utyiswa ngokulinganayo kwindawo ephezulu ye-kiln ngokusebenzisa i-multi-point rotary feeder.
Inkqubo yokukhupha ikalika: emva kokuba ilitye likakalika elipholileyo lipholile, ikalika egqityiweyo ikhutshelwa kwibhanti yokukhupha ikalika ngumatshini wokuthulula onamacala amane kunye namacandelo amabini evalve yokutshixa umoya. Kwimeko yokudubula, isalathiso kunye nesixa sokuchithwa kwekalika sinokuhlengahlengiswa ukuze kufezekiswe ukudubula kunye nokutsalwa okungundoqo.
Inkqubo yokususa uthuli: Emva kwefeni yedrafti eyenziwe, uthuli oluqulethe umsi kunye negesi kuqala ngokusebenzisa umqokeleli wothuli lwe-cyclone ukususa amasuntswana amakhulu othuli; Emva koko kwisikhwama sokucoca ukususa amaqhekeza amancinci othuli; Emva kokungena kwi-precipitator yefilimu yamanzi, igesi ye-flue iya kuxubha ngokuchaseneyo. ifilimu yamanzi ngamaxesha onke, kwaye umsi onothuli uya kumanziswa. Iya kungena ngaphantsi kwe-dust precipitator kunye nokuhamba kwamanzi kwaye ikhutshwe kwi-tank ye-sedimentation. Emva kwemvula, amanzi acocekileyo aya kuphinda asetyenziswe.
Inkqubo yolawulo lombane: ukwamkela isiJamani Siemens inkqubo yolawulo lwekhompyutha, umgca wemveliso oluzenzekelayo ngokupheleleyo, ukonga iindleko, umgangatho wemveliso ozinzile.
Ngaphambili: INdibano yeLime Kiln Production Line
Okulandelayo: UJuda Kiln-Inner Mongolia 300T/D×3 imigca yemveliso yekalika ehambelana nokusingqongileyo
ICalcium Hydrooxide Processing, Ukwenza iCalcium Hydroxide, I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide, ICalcium oxide Production Line,